भारतले पानी छाडेन
Monday, 01.30.2012, 03:11pm
नवलपरासी । गण्डक नहरबाट भारतीय पक्षले नेपाली किसानहरूलाई आवश्यक पानी नदिएको भन्दै विगतमा भएको आन्दोलन र त्यसपछिको सहमतिको पालना भारतीय पक्षबाट नभएको समाचार छ । यतिबेला भारतीय पक्षले भारतीय नहरमा विगत पाँच दिनदेखि पानी लगेको भए पनि नेपाली नहरमा भने अझै पानी छाडेको छैन ।
शहीद परिवारलाई महानगरको सहयोग
Monday, 01.30.2012, 03:10pm
काठमाडौं महानगरपालिकाले चार महान शहीद धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठको परिवारलाई काठमाडौं मासिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनताबिरुद्ध राजनीतिक साँठगाँठ
Monday, 01.23.2012, 03:19pm
काठमाडौं । देश अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सरकार जनतामारा सिद्ध भएको छ । पेट्रोलिम पदार्थको आशातीत मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण जनताको ढाड भाँच्चिएको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । जनप्रतिनिधित्व भएको व्यवस्थापिका संसद् चल्न सकेको छैन । केही दिन अगाडिसम्म आशा जगाएर अगाडि बढेको जस्तो देखिएको शान्ति प्रक्रिया अहिले शंकाको घेराभित्र परेको छ । संविधान लेखनको कार्यतालिका प्रभावहीन देखिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नियमित संवाद प्रक्रियामा समेत सामेल हुन छोडेका छन् । मुलुक राजनीतिक निकासविहीनताको जञ्जालमा फसेको छ । यसैबीचमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुक नै अर्को मुलुकमा विलय हुनसक्ने भय पैदा गरेर मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन आफ्नो सरकार विफल भएको पुष्टि गर्नुभएको छ । देश दुर्दान्त नियतिको चंगुलमा फस्दैगएको पर्याप्त संकेत यस्तै घटनाहरूले दिइरहेका छन् ।
शान्ति र संविधानका विवादित विषय यथावत
Monday, 01.23.2012, 03:17pm
काठमाडौं । अस्ति शनिवारसम्म स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनामा जाने माओवादी लडाकुहरूको बिदाई काम सम्पन्न भैसक्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । शान्ति प्रक्रियाको अलमलसंगै संविधान लेखन कार्य पनि अबरुद्ध छ । तालिका अनुसार कुनै काम नहुने पुरानो रोग पुनः बल्झिएको छ ।
एमालेको ‘घरफर्क अभियान’प्रति वाम चासो
Monday, 01.23.2012, 03:15pm
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीभित्रका विगतका तीता अनुभवहरूलाई बिर्सिएर एकढिक्का हुँदै एउटा ऊर्जाशील पार्टी बनाउने अभियान सुरु गरेको छ ।
एयर बस विमान दिन तयार
Monday, 01.23.2012, 03:13pm
अनेक काण्ड र भ्रष्टाचारले उठ्नै नसक्ने गरी थलापरेको राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगमका लागि युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयर बसले नेपाललाई दुइटा जहाज पुरानै मूल्यमा बेच्ने प्रस्ताव गर्दै पत्राचार गरेको समाचार छ ।
शुल्क बढाउने तयारी
Monday, 01.23.2012, 03:11pm
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूको शुल्क महंगो भएको गुनासो सार्वजनिक भैरहेका बेला काठमाडौंका निजी विद्यालयहरूले आगामी शैक्षिक सत्रमा शुल्क बढाउने तयारी गरिरहेको समाचार छ ।
प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य आवश्यक
Monday, 01.23.2012, 03:08pm
सरकारले सन् २०१२ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरे पनि लगानीका प्राथमिक क्षेत्रहरूको पहिचान हुन सकेको छैन । सरकारले लगानी प्रबद्र्धनका लागि लगानी प्रबद्र्धन बोर्डको गठन गरेपछि लगानीकर्ताहरूमा केही उत्साह थपिए पनि उचित वातावरण तयार हुनेमा अझै आशंका छ ।
Monday, 01.23.2012, 03:01pm
नेपालको भविष्य दिन प्रतिदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । सत्ता राजनीतिको विकारले मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त पार्नसक्ने आशङका खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत र चीनबीच पुलको काम गर्न नसके नेपाल तीमध्ये एउटा देशमा विलय हुनसक्छ भनेर भय प्रवाह गर्नुभएको छ ।
सञ्चारमा वैदेशिक लगानीको सवाल
Monday, 01.23.2012, 02:59pm
देश अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । समयसापेक्ष दृष्टिकोणको अभाव र नीतिविहीनताले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनका अपेक्षित परिणामहरू देखापर्न सकेका छैनन् । सञ्चार क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो छैन । यही मेसोमा सञ्चार क्षेत्रमा ४९ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी आउन दिने प्रावधान सहितको सञ्चार सम्बन्धी नीति २०६८ को मस्यौदा छलफलमा आएको छ ।
कांग्रेसको बाह्रौ महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिको निर्णय संसदीय व्यवस्था नै हो - लक्ष्मणप्रसाद घ�
Monday, 01.23.2012, 02:49pm
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको विद्वताप्रति नेपाली जनतालाई धेरै नै आशा थियो । हामीले पनि आशा गरेको हुनाले नै उहाँलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हौं । तर अहिले माओवादीले देशलाई रनभुल्ल पारिसक्यो । देशको प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर एउटा राष्ट्रसंग सन्धि सम्झौता गरेर स्वदेश फर्केपछि ‘मैले त जुवा खेलेर आए’ भन्नुहुन्छ । मुलुक जुवामा खेलिने वस्तु हो ? देशको नाममा प्रधानमन्त्रीले जुवा खेल्न पाइँदैन ।
मुलुक विलय हुने कुरा संसद्को विजनेश किन बनेन ? - यादब देवकोटा
Monday, 01.23.2012, 02:48pm
संसद भनेको सत्तापक्षको विरोध गर्नका लागि प्रतिपक्षहरूका लागि खोलिएको मैदान जस्तो मात्र भैरहेको छ । मुलुकका दीर्घकालीन महत्वका र राष्ट्रिय अस्मितासंग जोडिएका विषयहरूलाई समेत हल्कासंग लिएर राष्ट्रिय स्वाभीमानको तेजोबध गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो तापनि यसलाई खासै ठूलो विषय बनाइएन ।
Monday, 01.23.2012, 02:47pm
अन्तरिम संविधानको निर्माण र घोषणामा देखिएको तदारुकता र २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको जनउत्कण्ठा “कहिले संविधान निर्माण सम्पन्न हुन्छ र कस्तो संविधान बन्छ ?” भन्नेमा केन्द्रित थियो ।
Monday, 01.23.2012, 02:46pm
यो भनाइ, जसलाई यहाँ शीर्षक बनाइएको छ, मेरो होइन । यो हो हालै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेपछि मट्टीतेल किन्न गएकी एउटी गाउँले महिलाको अभिव्यक्ति । हुन पनि ‘म पछाडि फर्केर हेर्दिन’ भन्ने गिरिजाकै स्वाँठ ताल बाबुरामले ठ्याक्कै देखाए ।
चिनीया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण : द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि नयाँ अवसर
Monday, 01.16.2012, 04:54pm
काठमाडौं । चिनीया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको आकस्मिक नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यो भ्रमण सन्दर्भले कूटनीतिक विफलता र सुरक्षा प्रबन्धको असफलतालाई प्रत्यक्ष इङ्गित गरेको भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका निम्ति नयाँ अवसर दिएको छ । नेपालको स्थायित्व र विकासप्रति सदा सकारात्मक सहयोगभाव राख्दैआएको चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नसक्ने सम्भावना रहेको भए पनि यो भ्रमणलाई त्यस दिशातिर उन्मुख गराउन सरकार पूर्णतः असफल रह्यो । चरम विद्युत संकटको सामना गरिरहेको नेपालले पश्चिम सेती र बूढी गण्डकी जस्ता जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रबन्ध गर्ने आकांक्षा राखेको भए पनि तदनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले सकेन । नियमित सहयोगका अतिरिक्त शान्ति प्रक्रियालाई सघाउने समेतका कामलाई साढे पाँच अर्बको थप सहयोग प्रदान गरेर चीनले नेपालप्रति उच्च सद्भाव प्रकट गर्यो ।
सरकार जोगाउन बाहिरी शक्तिको चलखेल : वैद्य पक्ष अडानबाट पछि नहट्ने
Monday, 01.16.2012, 04:52pm
काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीको विवाद अस्थायी रुपमा मिलेको भनिए पनि विवादका विषयहरूमा दुवै पक्षको अडान यथावत् छ । विशेष गरी सरकार परिवर्तन र मधेशी मोर्चासंगको सहमति खारेजका सवालमा वैद्य पक्षको अडान दह्रो छ । उता वर्तमान सरकार टिकाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई मात्र होइनन् भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ पनि निकै सक्रिय रहेको बताइन्छ ।
» मन्त्रालय टुक्र्याउने संकेत
» शीर्ष दलहरूको आय–व्यय अपारदर्शी
» एसएसबीको ज्यादति
» समावेशीको नाममा भँडुवा नीति
» चिनीया सद्भाव प्रदर्शन
» कमजोर कूटनीति र फितलो सुरक्षा स्थितिको उपज नै ‘ट्रान्जिट’ भ्रमण – डा. जयराज आचार्य
» मुलुक सपार्ने शैक्षिक क्षेत्रमा कहालिलाग्दो विभेद : यादब देवकोटा
» नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो देखिन्छ : महेश्वर शर्मा
» आमाको अवशानबाट मन विचलित भएपछि चिन्तनशून्य हुन पुगिएछ : तारा सुवेदी
» राष्ट्रिय दिवस नै नभएको लाजमर्दो स्थिति : किरण बुर्लाकोटी
» वामपन्थी नेता श्रेष्ठ रहनुभएन
» “ महाभारतका केही प्रसङग”मा मुक्तिनाथ शर्मा
» फैजनको हत्यामा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता
» दलहरू संविधान नबनाउने बाटोतिर
» योजनाबद्ध रुपमा भारतीय स्वार्थ हावी : सडक र संचारमा ठूलो चलखेल
» दलहरूले दोहोर्याए विगतकै प्रवृत्ति
» संघीयताविरुद्ध नबोल्न धम्की
» राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ
Page 98/107: « :: ... 95 96 97 98 99 100 101 ... :: »